မြောက်ဒဂုံ (၃၃)ရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ မီးသင့် အမျိုးသားတစ်ဦး စိုးရိမ်ရသဖြင့် ရန်? - Yangon Media Group
မြောက်ဒဂုံ (၃၃)ရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ မီးသင့် အမျိုးသားတစ်ဦး စိုးရိမ်ရသဖြင့် ရန်?
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် (၃၃)ရပ်ကွက် နီလာလမ်းရှိ ဖိနပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်အိမ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မီးသင့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထားဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ကုသမှုပေးနေရကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် နေအိမ်သုံးလုံးနှင့် အိမ်နှစ်ခြမ်းမီးလောင်ခဲ့ပြီး လူလေးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၈ နာ ရီ ၁၅ မိနစ်က နီလာလမ်းအတွင်း ရှိ ဖိနပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်အမှတ် – – – ၌ ဆီမီးပူဇော်ထားသော ဖယောင်းတိုင်မှာ ဘုရားစင်အောက်ရှိ ဆီပုံးပေါ်ပြုတ်ကျရာမှ မီးစတင်လောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ဦးစီးမှူး ဦးထိန်လင်းက ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပြောသည်။ ”အိမ်လေးလုံး ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ အလယ် အိမ်သုံးလုံးနဲ့ ဘေးတစ်ဖက်က အိမ်အကာတွေပဲလောင်လို့ သုံးလုံးနဲ့နှစ် ခြမ်းပဲပျက်စီးတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူထဲမှာ မီးစလောင်တဲ့အိမ်က အမျိုးသားတစ်ဦးက စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်။ မီးလောင်မှုအဆင့်ကတော့ Level-1 သတ်မှတ်ထားပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် ပြောသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ မစိုးရိမ်ရအခြေအနေဖြင့် စံပြဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ စံပြဆေးရုံတွင်စိုးရိမ်ရသည့်အ ခြေအနေဖြင့်တင်ထားရာမှ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းတင်ပို့လိုက်ရကြောင်း ဇန်နဝါရီ၈ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်က ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး (၃၃) ရပ်ကွက် နီလာလမ်းအနီးနေ ဒေါ်ခင် ဆွေဝင်းက ”မီးကလောင်တာကြောက် စရာကြီး။ နီလာလမ်းထဲကလူတွေ ထွက်ပြေးကြတာ။ တချို့ဆို သေတ္တာ တစ်လုံးဆွဲပြီးပြေးတဲ့သူကပြေး၊ တချို့ ကျတော့လည်း အင်္ကျီတွေပဲယူပြီး ပြေးနေကြတယ်။ တကယ်တမ်းဖြစ်လာတော့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုမီးလောင် နေတဲ့အချိန်မှာ ပြေးလွှားနေကြတဲ့ မြင်ကွင်းက သနားဖို့ကောင်းတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ် ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကျပ် သိန်း၃ဝခန့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းမီးလောင်မှုကို ရပ်ကွက် နေ ပြည်သူများက ဇန်နဝါရီ ၈ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် သတင်း ပေးပို့သည့်အတွက် သွားရောက်မီး ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ နံနက် ၈ နာရီ ၂၄ မိနစ်တွင်မီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီး ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမီးလောင်မှုကို မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် ၁၁ စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်သုံးစီးနှင့် အထောက်အကူပြုယာဉ် သုံးစီးဖြင့် သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ဝ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ဝ၊ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးတို့ ဖြင့် မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့သည်။
ထိုင်းတွင် စက်ပစ်ကွင်းသစ် ဖွင့်လှစ်
အကြွေးဝယ်ကတ် သုံးစွဲသူများ ကြွေးမြီများကို ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် နောက်ဆုံးထား ပေးသွင်းရန်နှင့် ပ?
မြိတ်မြို့နယ်တွင် တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောသို့ ယာဉ်ကြောမှား ဝင်ရာမှ ခရီးသည်တင် ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မိ၊
ရှမ်းစော်ဘွားများ၏ ခမ်းနားသော၊ ရှားပါးသော ဝတ်စုံများကို အမျိုးသားပြတိုက် (ရန်ကုန်) တွင်ပြသ?
မလေးရှားပိုင် လန်ကာဝီကျွန်းတွင် သုံးရက်အတွင်း တရားမဝင်မြန်မာ ၅ဝ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ
ရှေးဟောင်းဘုရား၏ ရှုမျှော်ခင်းကို ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဘုရားနှင့် မလိုက်ဖက်သော အဆောက်အအုံ
ချင်းပြည်နယ်၏ ဒုတိယမြောက် ပညာရေးကောလိပ်ကို မင်းတပ်မြို့၌ ထပ်မံ တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်မည်
မန္တလေးမြို့၏ ဒုတိယမြောက် ဆင်စခန်းဖြစ်သည့် ဝါးနက် အပန်းဖြေ ဆင်စခန်းကို ယခုလကုန်တွင် ဖွင့်လ?